Hal-abuurka Ma La Baran Karaa: Tijaabo U Baahan In Laga Gun-gaadho?
(Hadhwanaagnews) Wednesday, December 06, 2017 09:54:38
waxa uu bandhigay aragti ahayd in hal-abuurnimada la baran karo. Waa ay jiraan dad badan oo qaba in ay tahay hibo Eebbe bixiyo
Marka aad akhrido dhambaalkan kaddib, nala wadaag talo iyo tusaale adiga oo ka jawaabaya ”Tallaabadani ma tahay mid habboon, mise waa mid aan hirgeli karin oo halkaas ayaynu ku hakinnaa?”
Kolkii uu Abwaan Maxamed Xaashi Dhamac (Gaarriye) Eebbe naxariistii janno ha siiyo’e daah-furay Miisaanka Maansada, isla markaana uu 1976kii Wargeyskii Xiddigta Oktoobar ku baahiyay maqaalladii uu kaga hadlay dhismaha maansada Soomaalida, waxa uu bandhigay aragti ahayd in hal-abuurnimada la baran karo. Waa ay jiraan dad badan oo qaba in ay tahay hibo Eebbe bixiyo, isla markaana aan la baran karin. Qof ahaan waxa aan aamminsanahay in ay aragtidani ku rumoobi karto ama meesha kaga bixi karto tijaabo aan af
ahayn ee fal ah. Waana ay dhici kartaa in dadka maskaxda furani ay bartaan.
Laba ka mid ah jaalleyaasha ii dhaw oo aan gu’yaalkii 2014ka iyo 2015ka waxoogaa uga iftiimiyay xeerarka maansada, mid ka mid ah waxa u suurtagashay in uu suugaan ka curin karo god-maanseed fudud oo aan tusaaleyaal ka siiyay. Kii labaadna wakhtiga ayaa nagu simi waayay in aan duruusta u dhammaystiro.
Haddaba muddo bil ah waxa uu Akadamiga Waxbarashada iyo Cilmi-baadhista (ERA) isku deyayaa in uu in uu diyaariyo bareyaal ku xeeldheer maansada Soomaalida qaybaheeda kala duwan: shuruudaheeda, godadkeeda, miisaankeeda, qurxinteeda: dhisme ahaan iyo macne ahaan, doorkeeda taariikhda IWM. Muddo bil ah ayaa dharaar walba la baran doonaa duruus wakhtigoodu yahay 30 daqiiqo idanka Alle. Haddii ay suurtgal noqon weydo aragtida ah barashada hal-abuurnimadu, waxa hubaal ah in qof kastaaba ka dheefi doono aqoon ku korodha dhigaalkiisa cilmi ee maskaxda ku kaysdan.
1. Waa in uu yahay qof ku wanaagsan adeegsiga afka Soomaaliga
2. In uu xiise u hayo maansada iyo suugaanta Soomaalida
3. In uu yahay qof aan hore hal-abuur u ahayn, bal se diyaar u ah inuu isku dedaalo ka-midho-dhalinta hammiga hal-abuurnimada
4. In uu adeegsan karo ciwaannada baraha bulshada Whatsup, ama Facebook si uu casharrada halkaas ugala socdo iyaga oo qoraal, maqal iyo muuqaal leh.
5. In uu diyaar u yahay ka shaqaynta laylisyada iyo waajibaadka waxbarashada, isaga oo aan cid la kaashan, naftiisana aan khiyaamin
6. In uu bixiyo lacagta diiwaan-gelinta (registeration fee) ah $20
Haddii uu qofku yahay hal-abuur ku cusub dhismaha maansada, isla markaana uu jecel yahay in uu sii kordhiyo aqoontiisa ama uu doonayaba in uu wax ka barto ugu yaraan xeerarka maansada, waa uu ka mid noqon karaa ardayda.
Maadaama oo adduun-weynuhu ku wada jaanqaadi karo adeegsiga baraha bulshada (Social Media) waxa aanu doorbidnay in tijaabadani ay noqoto mid wada gaadha bulshada Soomaaliyeed ee ku kala nool dacallada dunida. In aqoonta la ballaadhiyo halkii lagu koobi lahaa arday kooban oo fasal ku jirta ayaanu garannay. Tirada aanu bilaw ahaan diiwaan-gelin doonnaa waa 50 arday oo keli ah.. Waxa loo tixgelinayaa sida ay u soo kala horreeyaan.
Macluumaadka qofka laga rabo
1. Magaca oo saddexan................................................................
2. Dalka/magaalada uu joogo ...................................................
3. Ciwaankiisa Facebook .................................................................
4. Whatsup ...........................................
5. Email ................................................
6. Diyaar ma u tahay in aad buuxiso shuruudaha sare ..................
7. Miyaad tahay qof B. Xiisayna inuu Maansayahan noqdo T. Hal-abuur ah X. Jecel in uu suugaanta wax ka barto ................................................
Wixii Faahfaahin Ah Kala Xidhiidh
Whatsup 00252 63 4428604